प्रेमिकाले मेरो पेटमा बच्चा छ मेरो अन्तै बिवाह गरिदिन लागे भनेपछि प्रेमिकाको आग्रहमा पुगेका थिए नवराज ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/प्रेमिकाले मेरो पेटमा बच्चा छ मेरो अन्तै बिवाह गरिदिन लागे भनेपछि प्रेमिकाको आग्रहमा पुगेका थिए नवराज !
23,5914minutes read
रुकुम । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटका २० वर्षीय नवराज बिकले जातीय विभेद र अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध कै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । उनलाई जन्ती बनेर साथ दिन गएका अन्य दुई साथीको पनि ज्यान गएको छ । परिवारकै एक्ला छोरा नवराजको निधनले उनको परिवार विछिप्त बनेको छ । वेहुली लिन गएको छोरा नदिको वगरमा मृत फेला परेपछि भेरी नगरपालिका ४, रानागाउँकी उर्मिला विश्वकर्माको (नवराजकी आमा) वेहोस जस्तै भएकी छन् । छोरालाई साथ दिन गएका नवराजका दुई साथीको पनि त्यस्तै अवस्था भएको छ । यो घटनाले अहिले रुकुम शोकमा डुवेको छ । श्रीमान मोहनलाल अस्वस्थ्य भएका कारण उनी आफ्नो दैनिकी काम पनि गर्न सक्दैनन् । एक्लै ४ सन्तान हुर्काएकी उर्मिलाको अहिले संसार उजाडीएको छ ।
सानो जातले ठूलो जातलाई मन पराउनु हुँदैन भने कानुन लगाएर जेल हालेको भए पनि हुन्थ्यो । मारिदिए बाबु कसलाई गुहार माग्न जानु ? सरकारले हाम्रो पीडा सुन्दो रहेनछ ।,” उर्मिला निरूपाय हुँदै पीडा पोख्छिन् । आफु त्यो दिन घरमा भएको भए छोरालाई त्यसरी जान नदिने उनको भनाई छ ।
ुमेरो बाबु आमाले अन्तै बिहे गराइदिन लागेका छन् । पेटमा छ भन्दै थिइन् । यताबाट छोराले मेरो बच्चा मलाई चाहिन्छ । अरु मलाई केही चाहिँदैन भन्दै थियो,ु उनले भनिन् । एउटा मात्र छोरा थियो । प्रहरीमा भर्ती हुन थालेको थियो । हामी गरिब दलित हौं । उनीहरु ठकुरी त्यो केटीसँग सम्बन्ध राख्न छाड भनेकै हौं । तर मानेर अहिले ज्यानै हाली दिए,ु बाबु मुनलालले भने ।
‘लकडाउन’ खुकुलो हुने सङ्केत, मजदुरलाई उद्योगसम्म पुर्‍‍याइने
Breaking: आज पनि एकैचोटी थप १७० जनालाई कोरोना पुष्टि, संक्रमितको सख्या १२१२ पुग्यो
नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा गगन थापाले ओली सरकारलाई दिए धन्यबाद
२ महिनाको बालक सहित एउटै परिवारका १८ ले कोरोना जितेर घर फर्किए